DAAWO VIDEO DEG DEG: Shacabka Sanaag oo Mudaharado Puntland Lagu Tageerayo Dhigay Sland U Hanjabey.
September 20, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 3
Shacabka Gobolka Sanaag Iyo Degmada Badhan Ayaa Mudaharaado ka Dhigay Gobolka Sanaag Iyagoona Sidoo kale Kusoo Bandhigay Aragtidooda Inay tageer san Yahiin Booqashada Madaxweynaha Puntland uu Ku tagey Gobolka ,waxayna Fariin u Direem Soomaliland.
Shacabka Gobolka Sanaag Ayaa Muujiyey Inay Tageersan yahiin Puntland Loogana Bahan yahay Inaysan maamulka Soomaliland Soo faro Galin Gobolka sanaag uu yahay Gobolka Tirsan Puntland .
Madaxweynaha Puntland Ayaa Mashaariic Hor leh waxaa uu ka Daahfuray Gobolka Sanaag Isagoo Furay Mashaariic Horumarineed,
@Royal Highness Suldaan Dab La Riday
@Royal Highness Garaad Ali
Waxaan idin ku salaamay salaantii asalka ahayd oo kal iyo laab ah.
Marka aan wax yar ka idhaahdo booqashadan dhoollacaddeynta ah waxaa mudan in la xasuusnaado in aanu Cabdi Weli Gaas tolkan Sanaag daacad u ahayn oo uusan dantooda na qalbiga ku haynin. Munaafaqaddii siyaasiyiinta beenaaleyaasha ah badankooda lagu asteeyay ayuun buu muujinayaa oo waxaa uu u durbaan tumanayaa ol olahiisa uu damacsan yayay in uu Puntland dib iskugu soo sharraxo. Waxqabadka uu carro Maxamuud Saleebaan ka hirgaliyay Sool, Sanaag iyo Cayn kas ayuu uga hagraday waayo isaga oo weliba reer Dhuusamareeb ah ayuu Hartiga kale hoosta ka yasaa oo uu u arkaa kuwo aan reerka Maxamad Harti ahi la sinnayn. Runtii na tixdaas yar ee lala jiriricoonayo ee loo tiriyay wax ku dhaw xataa ma istaahilo haba yaraato ee oo waa hadal khasaaray.
Xaqiiqadu waxay tahay in ay Hartiga Sool, Sanaag iyo Cayn iyagu ka gaabiyeen oo una hagar bixi waayeen deegaanadooda qaniga ah, in kasta oo ay Soomaalida kala siman yihiin maanka qaldan ee dawlad uun waxqabad kasta laga suugayo oo afka loogu kala hayo. SIdaas oo ay tahay reer Sanaag hadda indhaha ayay kala qaadeen oo horumar baaxad leh ayaa xawli uga hirgalaya. Laakiin se xaqiiqadu waxaa weeye in aanay Cabdi Weli Gaas iyo Maxamuud Saleebaanku ba isku halleyn lahayn oo ay mudan tahay in laga foojignaado. Waxaa na ay runtu tahay in weligeed ba loo baahnaa in ay Hartiga kale oo ay hoggaanka u hayaan Siciid iyo Maxamuud iyagu isbahaysi heer Sool, Sanaag, Cayn iyo Bari ah sameystaan oo ay codkooda ku mideeyaan si hamuun-gorgorka siyaasadeed ee Maxamuud Saleebaan iyo tacaddigooda loo xakameeyo.
Asc wr wb haddian ka hadlo waxaa ka socda magaalada badhan waa wax lagu farxo. waxaa Bogaadin usoo jeedinayaa shacabka Badhan, suldaanka, ciidanka gobolka sanaag oo aah dad daacad ah puntlander ah.
Xagge kale haddan usoo leexdo:
1. Cabdiwali Gaas wax dan uma hayo shacabka Puntland, waxaa uu udigdig lee yahay waa doorasho, wax dooranayo maleh iga qora 2019 laisku ffadhiyaa. Gaas hadduu wax xoreyn lahaa Tukaraq ayuu xoreyn lahaa, Dhulbahante oo xolihda la yimid ayuu dayacay, ma idinla tahay ninkaan inuu ruux unaxayo. Waakaa ciidanka Puntland 9 bilood ayuu ka hortaagan yahay inay ceersadaan isaaqa ilkaha cagcagaaran, Gaas ayaa diidan. Waataa uu shalay faysal cali Waraabe yiri heshiis la galanay beesha caalamka iyo Gaas.
2. Walaalaheena warsangeli, haddii anagu nahay Puntland, waxaan idiin sheegaynaa shacabka Puntland waaka quusteen Gaas, yuu idin ku raadsan doorasho, dadkiina dhinaca ka raaca ee Puntland ee doonaya inay helaan isbeddel ka wacan Gaas.
3. Gaasna waxaa lee yahay Isaaqa adigaa kibirka uyeelay oo ciilay shacabka Puntland, waxba ha meermeersan 2018 waasii baxaysa dharkaaga sii dayaarso.
Note: Beesha isaaqna dhulkaan badhan warsangeli ayaa leh, waadna ogtihiin in aadan xoog ku iman karin ee edeb ujoga hargaysa, ilayn isaaqa ma dagaalamo waa munaafuq isku dira laba walaalo ah.
Dad horaa yiri beeni waxay orodaa intay runni kabaha gashanayso. Waxan ulajedaa c/wali shalay wuxuu lahaa isma sharaxidoono 2019ka, haduu is sharaxana cidi doran mayso puntland mardanbe yeysan dooran qubojoog ka baqaya in dalka uu passportka kahaysto laga dacweeyo. C/wali waa macangag fuleynima kadheer lkn waa nin rabba inuu America kuraxaysto passportkisa ilashanaya.
#2 puntland waxay u bahantahay xilligaan askari eyna gari galin oo qabqabla yaasha cagta madaxa saara. C/wali gaas madaxweyne marna uma qalmin ee wuxu kuwanaagsanaa waziir maaliyad ama qorshayn iwm